Addis Ababa: Sheekh Shariif iyo xubno dawladiisa ah oo ka degay Garoonka Bole – Rasaasa News
Addis Ababa: Sheekh Shariif iyo xubno dawladiisa ah oo ka degay Garoonka Bole
Addis Ababa, November 24, 2011 [ras] − Madaxweynaha Somaliya, Sheekh Shariif Sheekh iyo wafdi uu hogaminayo ayaa gaadhay magaalad Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia, halkaas oo ay kaga qayb gali doonaan shir deg deg ah oo ay yeelanayaan maalinta bari ah madaxda IGAD.
Wafditiga Sheekha, waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga DKMG ah, Xuseen Carab Ciise, saraakiil ciidan iyo xildhibaanno baarlamaanka ka tirsan, waftiga ayaa Ethiopia joogi doona mudo laba dharaarood ah.
Wasiirka gaashaandhiga Somaliya ayaa sheegay in kulanka IGAD oo maanta furmaya laggaga hadlayo sidii si wada jir ah loola dagaalami lahaa ururka Al shabaab.
Waxaa kale oo uu wasiirku sheegay in kulanka maanta ay isku arkayaan wasiirada gaashaandhiga ee dalalka IGAD. Maalinta bari ahna waxaa kulmay madaxweyneyaasha dalalka IGAD, si go,aan midaysan looga soo saaro.
Shirka waxaa ka hadli doona dalalka ay ciidamoodu hore u sii joogeen dalka Somaliya iyo kuwa ay ciidamadooda hada soo galeen dalka. Waxaa la filayaa in ciidamada Afrika ee Somaliya jooga oo dhan ay qaadan doonaan Shaadhka AMISON.
Madaxweyne Shariif , ayaa ka soo horjeeda soo galintaanka Somaliya ee ciidamada Ethiopia iyo Kenya, oo la aaminsan yahay in ay yihiin kuwa kaliya ee ka saari kara Somaliya Al shabaab.
Wali ma cada sababta uu sheekhu ku diidan yahay soo galintaanka Ciidamada Ethiopia iyo Kenya gudaha Somaliya, kuwaas oo ay ujeedadoodu tahay la dagaalanka Al shabaab.
Dhinaca kale masuuliyiinta xukuumada Somalida ayaa soo dhaweeyey cid kasta oo Al shabaab dalka Somaliya ka saari karta kala sooc la,aan.